Fonzarelli NKD – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2021
12 केडीई (16.1 एचपी)
एनकेडी एक इलेक्ट्रिक मोपेड इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता अस्ट्रेलियाबाट फोन्जरेल्लीबाट आएको हो। कम्पनीको नाम चरित्र फोन्जीबाट प्रेरित भएको थियो १ 60 .० को टिभी कार्यक्रम हेप्पी डेजबाट । कम्पनीको क्रेको “Bespoke styling. Amped up performance. And most importantly, zero emissions” ।
Fonzarelli NKD एक भागदार, शहरी, दोहोरो खेल मोपेड हो जुन अस्ट्रेलियामा डिजाइन र निर्माण गरीएको छ।
मोपेडसँग १०० किमि प्रति घण्टाको शीर्ष गतिको लागि,, .०० वाटको इलेक्ट्रिक मोटर छ। मोपेडमा N 56 एनएम टोक़ छ र -1 सेकेन्डमा ०-१० किमी / घन्टाबाट द्रुत हुन्छ।
मोपेडसँग लिथियम ब्याट्री १२० किलोमिटरको दायराको लागि छ। चार्ज समय hour०% चार्जको लागि १ घण्टा हुन्छ।
मोपेड कुनै पनि र colorमा उपलब्ध छ र फोन्जलाबद्वारा निजीकृत गर्न सकिन्छ।
2021 Fonzarelli मोडेलहरू